सुन्दरता – Health Post Nepal
अनुहारबाटै थाहा हुन्छ स्वास्थ्य अवस्था, बिरामी हुँदा देखिन्छन् यस्ता संकेत
अनुहार शरीरको एउटा पाटो हो, जुन मानिसहरुले कयौं पटक दिनमा हेर्छन। अनुहार राम्रो बनाउन सबैले कोसिस गरिरहेकै हुन्छन्। तर, त्यही अनुहारबाट नै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ। रोगका लक्षणहरु अनुहारमा पनि देखिन्छन्। पहेँलो अनुहार र आँखा शरीरमा धेरै...
दाँत माझ्ने ब्रस कस्तो हुनुपर्छ ?
कपाल झर्ने समस्याबाट कसरी छुट्कारा पाउने?
कपालले मान्छेलाई सुन्दर मात्रै देखाउँदैन आकर्षक पनि देखाउने गर्छ। कपालले मानिसलाई स्टाइलिस देखाउनुका साथै केहि हदसम्म व्यक्तित्वको पहिचानमा समेत मद्दत पुग्छ। सबैले आफ्नो कपाल राम्रो होस्, बाक्लो होस्, अर्थात नझरोस् भन्ने चाहान्छ। मानिसको रहनसहन खानपान तथा पानीको प्रयोगले कपाल...
प्राय महिलाहरूको व्यागमा मेकअपका सामग्री हुनेगर्छन्। त्यसमध्ये प्रमुख हो लिपिस्टिक। टिपिस्टिकले महिलाहरूलाई निकै सुन्दर देखाइरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि महिलाहरूले लिपिस्टिकको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यदि लिपिस्टिकलाई मिलाएर लगाएको छ भने त त्यसले सुन्दरतामा महकता नै थपिदिएको हुन्छ। त्यसैले सधै लिपिस्टिक...
‘सरुवारोग होइन सेतो दुबी , उपचारले ठिक हुन्छ’
अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भागमा सेतो दाग भएमा मानिसलाई हीनताबोध हुने गरेको छ । आफ्नो सौन्दर्य बिग्रिएका कारण कसैले केही भन्छ वा कसैले नराम्रो दृष्टिकोणबाट पो हेरिरहेको छ कि भनेर दुबी भएका जोकोहीलाई लाग्न सक्छ । तर, दुबी...
ग्रीष्मकालीन वर्षामा छालारोगको उच्च जोखिम, कसरी सुरक्षित राख्ने ?
वर्षाको मौसम सुरु भइसकेको छ । वर्षाकै कारण बढ्दो तापमानबाट हामीले केही हदसम्म राहत पनि महसुस गर्न थालेका छौँ । यद्यपि, हरेक मौसमका गुण र अवगुण अवश्य हुन्छन् । गर्मी मौसममा हुने वर्षाले हामीलाई गर्मीबाट जति राहत महसुस गराउँछ,...
यमी भइन् ‘हेल्दी बेबी’
बुटवलमा भएको हेल्दी बेबी प्रतियोगितामा बुटवल अमरपथ निवासी सिप्रा वज्राचार्यकी ९ महिनाकी छोरी यमी वज्राचार्यले प्रथम पुरस्कार जितेकी छिन् । २ वर्षमुनिका शिशुबीच गरिएको प्रतियोगितामा ३९ जनालाई पछि पार्दै यमी प्रथम भएकी हुन् । प्रतियोगितामा बुटवलकी विम्नी श्रेष्ठका ६...
किन हुन्छ कपाल चाँडै सेतो?
आजकाल अधिकांश मानिसको कपाल चाँडै नै फुलेको पाइन्छ। विशेषज्ञका अनुसार सानै उमेरमा कपाल फुल्नुु एक रोग हो। डाक्टरी भाषामा यसलाई ‘केनाइटिस’ भनिन्छ। इन्डियन जर्नल अफ डर्माटोलोजीमा सन् २०१६ मा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार भारतमा केनाइटिसका लागि २० वर्षको उमेर तोकिएको...